နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Charger ပါဝါ Circuit Board > Charger ပါဝါ Circuit Board
ကျွန်ုပ်တို့သည် power circuit board များအားအားသွင်းရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီတွင်ခိုင်မာသည့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်များ၊ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၊ အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများ၊ SMT ချစ်ပ်အပြောင်းအလဲနှင့် Post-welding assembly တို့ကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်များရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောပြင်ပပါဝါ adapter circuit ကိုပျဉ်ပြား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် power circuit board များအားအားသွင်းရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီတွင်ခိုင်မာသည့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်များ၊ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၊ အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများ၊ SMT ချစ်ပ်အပြောင်းအလဲနှင့် Post-welding assembly တို့ကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်များရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောပြင်ပပါဝါ adapter circuit ကိုပျဉ်ပြား။ ဥရောပ၊ အမေရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်စျေးကွက်ခွဲ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တရုတ်ရေရှည်လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ...
၁။ Charger power supply Circuit board သတ်မှတ်ချက်များ -
5V1A circuit board input voltage 220V output voltage 5V တိုက်ရိုက်အားသွင်းသည် ခဲ - အခမဲ့ဖြစ်စဉ်ကို
2. charger Power circuitboard ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အသုံးချမှုများ -
1ï¼‰အင်ဂျင်နီယာသည် power supply စီးရီးများ၏တည်ငြိမ်သောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ circuit board ၏ output voltage parameters များသည်စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်ပြီးဗို့အားအတက်အကျကြောင့်ထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းကိုထိခိုက်စေသည်။
2ï¼ dur ကြာရှည်ခံမှုကိုစဉ်း စား၍ ဆားကစ်ဘုတ်သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်ယူပြီးနာရီ ၇၂၀ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုအိုမင်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ circuit board တွင်အလိုအလျောက် fuse box နှင့်မြင့်မားသော voltage သို့မဟုတ် short circuit automatic automatic များတပ်ဆင်ထားသည်။ ဘေးကင်းပြီးနောက်၊ circuit board သည်အလိုအလျောက်ပြန်လည်အလုပ်လုပ်သည်။
3ï¼‰ဆားကစ်ပြားများကိုလက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ router များ၊
charger power supply circuit board ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၃ ။
ရွေးချယ်မှုနှင့်ရွေးချယ်မှု (တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဥရောပစသည်)
1ï¼ c တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်အမျိုးသားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အေဂျင်စီ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်သော FCC / UL ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်
ငါတို့အသီးအသီးအဘို့2ï¼ ထုတ်ကုန်များ၊ ထုတ်ကုန်တိုင်းသည် ပင်ကိုယ်မူလစမ်းသပ်မှု။ မဟုတ်ကျပန်းစမ်းသပ်မှု။
1ï¼‰ Regularcircuit boards ကိုလက်ဖြင့်ရနိုင်သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင်တင်ပို့နိုင်သည်။
2ï¼‰ပုံသေတပ်ဆင်ထားသောဆားကစ်ဘုတ်ကို ၇ ရက်ကြာအောင်နမူနာ။
သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်သင့်အားဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များပေးလိမ့်မည်။ မည်သည့်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားရှိတိုက်နယ်ဘုတ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်သောင်းချီသောဆားကစ်ပြားများကိုပြီးစီးခဲ့ပြီး၎င်းကိုမည်သို့ဒီဇိုင်းနှင့်မည်သို့ထုတ်လုပ်ရမည်ကိုသိသည်။ အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် andconsistent circuit board များလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်မှုသည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းများဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုတည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်တစ်သမတ်တည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်တည်ငြိမ်သောကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။
ငွေပေးချေခြင်း နည်းလမ်း - ကြိုတင်ပေးငွေ ၃၀%၊ တင်ပို့ပြီးနောက်ငွေလက်ကျန်။
3ï¼ the အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်မသိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းပြခန်းသို့သွားပြီးနမူနာကိုကြည့်ရှုရန်၊ အတည်ပြုရန်နှင့်မှာရန်ဖြစ်ပါ၊ အရည်အသွေးမှာအမှာစာဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အကြားခြားနားချက်ရှိလျှင်ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းတို့ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်လျှင်ဖြန့်ဝေမှုအရည်အသွေးပေါ်မူတည်သည်။ နမူနာအပေါ်!
၈။ တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများ။
အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုပေး ရောင်းအားစွမ်းဆောင်ရည်စျေးနှုန်းအချိုး, စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ, ကုန်ပစ္စည်းများတက်ကြွစွာခြေရာခံ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီပါ။
1. Ifit သည်ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်၏အရည်အသွေးပြproblemနာဖြစ်သည့်အတွက်မကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်ကိုသဘောတူညီထားသောကာလအတွင်းအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီပေးလိမ့်မည်။
၂။ ထုတ်ကုန်ကိုလူ့အသိုက်အ to ့ကြောင့်သာမန်အားဖြင့်အသုံးမပြုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာ၏အကြောင်းရင်းကိုဖောက်သည်အားရှင်းပြပြီး၊ ပြနာကိုကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံခြင်းဖြင့်မဖုံးကွယ်ပါ၊ ဖောက်သည်ဖောက်သည်ရဲ့ပြproblemနာအရသိရသည်။
Hot Tags: Charger Power Circuit Board၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ